မြန်မာ့သမိုင်းကို ကယ်တင်ခဲ့သူ | ဧရာဝတီ
ချာလီ ကမ့်ဘဲလ်| July 13, 2012 | Hits:1
| | ဒေါ်မော်နီကာမြမောင်သည် ရန်ကုန်ရှိ ဗြိတိသျှကောင်စီတွင် ၃၈ နှစ်ကြာ အမှုထမ်းခဲ့ပြီး ၁၉၇၉ တွင် MBE ဆုတံဆိပ်ချီးမြှင့်ခံရသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အသက် ၉၁ နှစ်အရွယ်တွင် ကွယ်လွန်သည် (ဓာတ်ပုံ – British Council)
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>ဲိJoseph July 13, 2012 - 3:10 pm	သိပ်အရေးကြီးတဲ့ မြန်မာ တို့ရဲ့ သမိုင်းစာအုပ်စာတမ်းတွေ ကို အကောင်းဆုံး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာဟာ မြန်မာပြည်နဲ့မြန်မာတွေ ကိုကာကွယ်စောင့် ရှောက်ပေးခဲ့ တာနဲ့ အတူတူ ပါဘဲ။ မြန်မာနိုင်ငံ သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆရာမကြီးကို လှိုက်လဲ စွာ ကျေးဇူးတင်လျက်ပါ။
Reply	Maung Maung July 13, 2012 - 11:32 pm	ဒေါ်မော်နီကာမြမောင် ရောက်ရာဘုံဘ၀မှာ ကောင်းကျိုးချမ်းသာ ရနိုင်ပါစေ။ အန်တီမိုးဆိုတာလည်း သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ။ အန်တီမိုးကို ဆက်ခံမည်သူများ ဒေါ်မော်နီကာတို့လိုလူသားဆန်သူများ စာအုပ်စာပေ ချစ်မြတ်နိုးသူများ ပေါ်ပေါက်ပါစေ။ကမ္ဘာပေါ်ရှိ စာကြည့်တိုက်များ မြန်မာနိုင်ငံရှိစာကြည့်တိုက်များ ထာဝရတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေ။ သမိုင်းဆိုတာ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် စောင့်ရှောက် ပြုစု ပျိုးထောင် ဖြန့်ကျက် လက်ဆင့်ကမ်း ပေးသင့်တဲ့အရာပါ။ အနာဂတ်အတွက် သင်ခန်းစာယူစရာ အတုယူစရာ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ အထွေထွေဗဟုသုတ သိုမှီးသိမ်းဆည်းထားတဲ့ အတိတ်က ဖြစ်ရပ်ပါ။ သမိုင်း ကို ဖျောက်ဖျက်တာ၊ ပြောင်းလဲတာ ၊ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အတိုင်း ပုံသွင်းတာ ၊ အသစ်ပြန်ရေးဆွဲတာ စတာတွေ လုပ်လို့မရပါဘူး။ ဘယ်လိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်း ထာဝရ တည်ရှိနေမှာပါ။ ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးခဲ့တဲ့လူတွေ ဖန်တီးခဲ့တဲ့လူတွေကို သိစေချင်ပါတယ်။အင်း…..အာဏာရှင် လူဆိုးသူခိုး လူသတ်သမားများဟာ ထာဝရ အဲဒီအတိုင်းပဲ သမိုင်းထဲမှာ နောင်ကမ္ဘာတည်သရွေ့ ဆက်လက်ရှိနေမှာပါ။ ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေး ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပြစ်ဒဏ် နင်နဲ့ နင်ဆွေမျိုး သားစဉ်မြေးဆက် မျိုးဆက်တစ်ခုလုံး ခံပေဦးတော့ပေါ့။
Reply	ရဲခေါင် July 14, 2012 - 7:04 pm	မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီး ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ မျက်နှာဖြူ (မလိုတမာစကားလုံး)တွေအများ ကြီးပါ၊ ဆရာကြီးလုစ်၊ ဖာနီဗယ်၊ ဟောလ်တို့လို သမိုင်းပညာရှင်တွေ မောရစ်ကောလစ် ပုဂ္ဂိုလ် တွေ၊ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဟယ်လင်လို့ အမည်ပေးခံရတဲ့ သူနာပြုအမျိုးကြီး လိုလူမျိူးတွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်၊ ယခုလို တိမ်မြုပ်နေတဲ့ မော်နီက မြမောင်လို အမျိုးသမီးကြီးတဦး အကြောင်းကို ဖော်ပြတဲ့အတွက် ဧရာဝတီကိုရော ၊ စာရေးသူကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Reply	Min Tway July 15, 2012 - 12:05 am	I met this Great lady once over 30 years ago at the British Embassy in Yangon . I didn’t know who she was at the time . But what I noticed was she was very eager to help Burmese people . She was very patient and spent her precious time to help usagroup of young Burmese get visa to go and study in UK .
I still vividly remember our meeting. She wasavery humble great human being . When we got to UK we met with many more white British people and almost all of them were also very nice and treated all of us as equal without any discrimination . I must say the British or English people are very tolerant and generous to people of other countries . They are also very broadminded and in short they are very civilised. In actual fact our Burmese people are very narrow minded and discriminate against other ethnic people and other religion . Burmese people do not treat other ethnic people as equal . and basically Burmese are very racist . In other word Burmese are not that civilised as they think they are . Civilised people have no racist view and treat all ethnicity or reliogion as equal
Reply	sayargyi July 23, 2012 - 6:01 pm	နယ်ချဲ့စနစ်နဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုခွဲခြားမမြင်နိုင်သေးတဲ့မျက်ကန်းများအသိတရားရရှိဘို့ကူညီနိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့
Reply	komoe July 26, 2012 - 12:17 am	အမျိုးဘာသာမတူသော်လည်းသူ့ ရဲ့စိတ်နေသဘောထားအကျင့်အတွေးအခေါ်အယူအဆအမျှော်အမြင်ကြီးမူ့ ကအတုယူလောက်ပါသည်ကျေးဇူးတင်ထိုက်ပါသည်